SAF oo ay ka go’an tahay inuu Man Utd keeno Lewandowski. - Caasimada Online
Home Warar SAF oo ay ka go’an tahay inuu Man Utd keeno Lewandowski.
SAF oo ay ka go’an tahay inuu Man Utd keeno Lewandowski.
Weeraryahan Robert Lewandowski ayaa mar kale diirada u saaran Manchester United. Sida uu qoray wargeyska Daily Mail.
Xidiga reer Poland ayey saaxiibadiis kula taliyeen inuu ka tago Borussia Dortmund dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Ka dib markii laga diiday dalabyo xilli ciyaareekii hore uga yimid United, kooxda Jarmalka ayaa aqbaleysa inay lumiso hugaamiyahooda.
Heshiiska uu kula jiro Dortmund wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo aadan, United ayaana rajo ka qabta inuu qimaha xidigaan ka yaraado 12 milyan oo ginni oo ay horay ugu soo qaateen saaxiibkiis Shinji Kagawa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Sir Alex Ferguson ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu 24-jirkaan Lewandowski weerarka Red Devils kula lamaaniyo Robin van Persie, iyadoo uu Wayne Rooney ka caawnayo booska quudiyaha taasoo uu doonayo inuu ku abuuro weerarka ugu xooga badan Premier League.